Preezdaantiin Gibts Abduul Fattaa Alsiisii Sudaanii fi Liibiyaa mariisisuufi – Fana Broadcasting Corporate
Preezdaantiin Gibts Abduul Fattaa Alsiisii Sudaanii fi Liibiyaa mariisisuufi
Egyptian President and African Union Chairman Abdel Fattah al-Sisi giveS a joint press conference with the Ivorian president at the presidential palace in Abidjan, on April 11, during the Egyptian president's visit to Ivory Coast. (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP) (Photo credit should read ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images)
Finfinnee, Eebila 15, 2011(FBC)- Dura taa’aan Gamtaa Afrikaa yeroo ammaa fi preezdaantiin Gibts Abduul Fattaa Alsiisii dhimmoota yeroo ammaa Sudaanii fi Liibiyaa keessatti nageenyaan walqabatee mul’atan ilaalchisee biyyoota lameen waliin mari’achuuf ta’uu ibsameera.
Walgahiin ariifachiisaa Preezdaantichi guyyaa har’aa Kaayrootti waaman haala siyaasaa yeroo ammaa biyyoota lameenii irratti kan xiyyeeffateedhas jedhameera.
Walgahichaan jijjiiramoota erga humni waraanaa Sudaan aangoo qabatee booda dhufee fi haala walitti bu’iinsa Liibiyaa keessatti mudate ittiin furuun danda’amu irratti ni mari’atus jedhameera.
Walgahii kana irratti qondaaltonni Chaad, Ruwaandaa, Koongoo, Somaaliyaa, Jibutii fi Afrikaa Kibbaa irratti ni hirmaatu jedhameera.
Kana malees Ityoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Ugaandaa, Keeniyaa fi Naayjeeriyaa dabalatee dura taa’aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii walgahiicha irratti akka hirmaatan ni eegamu.
Ajandaan ijoo marichaas akkaataa nageenyi waaraa Sudaanii fi Liibiyaatti dhufuu danda’u irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffamu ta’uu ibsameera.
Torbee darbe Gamtaan Afrikaa manni maree waraanaa Sudaan aangoo amma qabate guyyoota 15n keessatti ummataaf yoo dabarsee kennuu baate qoqqoobbiin kan eegatu ta’uu ibsuun ni yaadatama.
Indiyaa imala Addeessaa yeroo lammaffaa deebitee yaaluuf jetti